Contact Us - Gemological Institute of muCambodia
Gemological Institute of muCambodia (GEMIC Laboratory Co., Ltd.)
Husiku Musika Mugwagwa, Siem Reap, Cambodia
Ndapota taura nesu
Kuchengetedza uye kuvanzika
Kune mumwe mubvunzo
Unogona kurayira gwaro paunenge wedzera chinhu kuti ngoro yenyu. Kuti vaite izvi, baya kubatana "wedzera gem chitupa chechinhu ichi" pamusoro chinhu zvakadzama peji pamusoro "wedzera kungoro" bhatani. Izvi zvichaita kuzarura chitupa zvamungaita.
Ose mabwe anokosha kubva kuGEMIC idombo rechisikwa rakagadzirwa neNyika. Isu hatishande mukugadzira kana marabhorani akagadzirwa "anokosha".
Sarudzo dzekubhadhara uye marongero
GEMIC inongobhadharisa huwandu hwaratidzwa. Chero ipi mari yekuwedzera inongoitirwa chete nePayPal's, yako kiredhiti kadhi kuburitsa emabhangi kana eWestern Union marongero.
Kana iwe uine matambudziko nekubhadhara kana uchida kukurukura dzimwe nzira dzekubhadhara, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Mapakeji ese kubva kuGEMIC anosanganisira invoice yakazara. Ndokumbirawo utibate usati waisa odha yako kana iwe uchida invoice yakagadziriswa kana isina invoice zvachose.
Coloured gemstone kujeka chiyero
putkiston osat : Almost loupe yakachena - chaizvo, zvishoma zvishoma inclusions; inclusions zvisingawanzoonekwa pasi pegumi kukura.